musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Grenada Kupwanya Nhau » Grenada Underwater Sculpture Park inopedza kugadziridza
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Grenada Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Grenada Underwater Sculpture Park inopedza kugadziridza.
Iko kuisirwa kunosanganisira makumi masere nemaviri ehupenyu-saizi zvivezwa zvinoratidza tsika yeGrenada uye akagadzirwa kubva kwakasiyana midhiya asi zvakanyanya kubva kune akareruka substrates anosanganisira kongiri. Ivo vanogadzira yakanakira substrate, yakagadzikana uye isingaperi, iyo hupenyu hwemugungwa hunogona kukura.
Grenada Underwater Sculpture Park yakavhurwa muna 2006 uye yaive yekutanga yerudzi rwayo munyika.
Paki iyi yaifungidzirwa nemuvezi weBritish Jason deCaires Taylor uye inowanikwa kune vese vanoita snorkelers uye vakasiyana.
Iyo Grenada Underwater Sculpture Park ipfuma yenyika uye kuchengetedzwa kwayo kwakakosha pakuchengeta kukwezva kwakachena kwemvura yeGrenada.
Iyo Grenada Tourism Authority (GTA) yakazivisa nhasi kuti chirongwa chekuvandudza che Grenada Underwater Sculpture Park (USP), iri kure neWest Coast yeGrenada muMolinere Beauséjour Marine Protected Area, yapera.
Yakaziviswa seimwe yePamusoro 25 Wonders of the World neNational Geographic, paki iyi yakaonekwa nemuvezi weBritish Jason deCaires Taylor uye inosvikika kune vese vanotsvedza nevanonyura. The Grenada Underwater Sculpture Park yakavhurwa muna 2006 uye yaive yekutanga yerudzi rwayo munyika. Yakava imwe yenzvimbo dzinonyanya kufarirwa.
Kuiswa kwacho kunosanganisira 82 ehupenyu-saizi zvivezwa zvinoratidzira Grenada's culture uye akagadzirwa kubva kwakasiyana siyana midhiya asi zvakanyanya kubva kune akareruka substrates kusanganisira kongiri. Ivo vanogadzira yakanakira substrate, yakagadzikana uye isingaperi, iyo hupenyu hwemugungwa hunogona kukura.
Imwe yezvivezwa zvepaki inonyanyozivikanwa ndeye Vicissitudes, denderedzwa remifananidzo makumi maviri nemasere yakaumbwa kubva kuvana veko veGrenadian vakabatana maoko. Zvimwe zvidimbu zvinozivikanwa zvinosanganisira “Munyori Akarasika,” mumwe murume anoshanda patapureta padhesiki rakavharwa nezvakachekwa mumapepanhau; “Sienna,” chivezwa chinoyevedza chinoratidzira chimiro chinoyevedza chepwere inotsaura ganda kubva munyaya inodiwa zvikuru yomunzvimbomo; uye "TAMCC Faces," nhevedzano yezviso zvakakura sehupenyu zvinoita kunge zvakaumbwa mumukaha wedombo guru rekorari raisanganisira vadzidzi vekoreji yenharaunda yeko.
Nokufamba kwenguva, paki yezvivezwa yakakanganiswa nemasimba ezvakatipoteredza. Nokudaro kuchengetedza kutendeseka kwayo, kuedza kwekudzorera kwakatangwa kuchengetedza kukodzera kwezvakatipoteredza uye mupiro kune hukuru hwehupenyu hwemvura hunounza. Kuedza uku kwakasiyana kubva pakugadzirisa nekuchenesa zvivakwa zvakanangana nekubvisa nekutamisa vamwe.
"The Grenada Underwater Sculpture Park ipfuma yenyika uye kuchengetedzwa kwayo kwakakosha pakuchengeta kukwezva kwakachena kwe Grenadamvura, "akadaro Petra Roach, CEO, Grenada Tourism Authority. "Yakagadzirwa nehunyanzvi kuti iite sedombo rekugadzira, paki yakakwezva huwandu hunoshamisa hwezvipenyu zvemugungwa munzvimbo iyi kubva payakaiswa uye yakapa nzvimbo yekuti koral ikure - izvo zvakakosha pakuedza kwedu kuchengetedza uye kuzvipira kurwisa kuparadza kwekudziya kwepasi. Isu veGrenada Tourism Authority ticharamba tichitsigira nekutsigira mapurojekiti akadai kuitira kuti tive nechokwadi chekuti nzvimbo yacho inobudirira uye nekuedza kwakasimba.